Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo Hadalkii ugu Kululaa Abid Jeediyey -
Muqdisho:(Tusmo Times)Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi oo ka mid ah xildhibanada Barlamanka Jamhuuriyadda Fardalka soomaliya oo maanta shir saxafadeed ku qabtay muqdisho ayaa waxa uu shirkiisa uu kaga hadlay Arimo la xiriira xujeysada soomalida dhibatooyiinka ay la kulmaan marka ay tagaan magalada barakeysan Maka Al mukaramah.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan ibbi ayaa ugo horeen waxa uu aad u soo dhaweyey Talabada ay qaday wasarada Diinta iyo Owqaafta soomaliya ee ah in shatiyo ay gudoonsiyaan shirkada Duulimaadyada dalka kuwaasi awood u siinaya in ay sanadkan ka qeyb qataan Daabulidda xujeyda soomaaliyeed.
Sido kale xildhibaanka ayaa waxa uu Dowladaha islaamka ku namaanay xagameenta Arimaha la xiriira Xujeyda Isagoo ugo baaqay in ay sii xoojiyaan ka dhabeenta taladaban ay qadeen.
Waxaa kaloo uu sheegay in ay jiraan Arimo xaga Sharciyada Gudasha Xajka oo Shirkadaha Qaar aanay u sharaxin Xujayda Markii ay Galayaan sucuudiga Taasoo ku habooneed in loo Faa-Faafihi Xujayda.
Xildhibaanku wuxuu intaas ku daray in Dul duleelada jira ay hor gaynayaan baarlamanka halkaasana looga hadli doono Bisha soo socota oo baarlamanka kulankiisa uu furmayo.
Related Items:Featured, Xildhibaan Cabdiraxmaan Ibraahim Xaaji Aadan oo Hadalkii ugu Kululaa Abid Jeediyey